New York, September 21, 2004—On Monday, September 20, a magistrate's court in Zimbabwe's capital, Harare, acquitted four directors of the independent, banned newspaper the Daily News, who had been charged with publishing the newspaper illegally. The court ruled that...
June 16, 2003 12:00 PM ET
Your Excellency, The Committee to Protect Journalists (CPJ) is outraged by your government's continuing harassment of Andrew Meldrum, Zimbabwe correspondent for the U.K.-based Guardian newspaper. Immigration officials ordered him today to leave the country.
New York, May 16, 2003—Andrew Meldrum, Zimbabwe correspondent for the U.K.-based Guardian newspaper, was ordered today by immigration officials in the capital, Harare, to leave the country. Meldrum went to the Department of Immigration today at 10:00 a.m. for...
New York, May 16, 2003—Zimbabwean immigration officials today deported Andrew Meldrum, Zimbabwe correspondent for the U.K.-based Guardian newspaper, from the country. Officials at Harare Airport forced Meldrum onto a London-bound Air Zimbabwe flight, ignoring a high court order staying...
New York, May 8, 2003—The Committee to Protect Journalists (CPJ) is concerned for the safety of Andrew Meldrum, Zimbabwe correspondent for the U.K.-based newspaper The Guardian. A group of immigration officers visited the journalist’s home unannounced yesterday evening and...